JustControl.it: Automate Attribution Dhata Yekuunganidza Pakati Penzira
Chitatu, October 7, 2020 Chitatu, October 7, 2020 Roman Sulla
Kushambadzira kweDhijitari kunoitiswa nekudiwa kwekushandurwa kwakanyanya: nyowani dhata masosi, musanganiswa mutsva wekudyidzana, inogara ichichinja mareti, akaomesesa UA zviitiko, nezvimwe. Nezve ramangwana reindasitiri yedu, inovimbisa kutonyanya kunetsa uye granular. Ndicho chikonzero nei vanobudirira uye vanoshuvira nyanzvi vachida zvinoshanda unosimudza kubata nemamiriro akaoma nemifananidzo yakaoma. Nekudaro, maturusi mazhinji aripo achiri kupa yechinyakare 'imwe-saizi-inokodzera-ese' maitiro. Mukati meichi chimiro chekutanga, ese ma
App Annie: Mobile Revenue, Kurodha pasi, Kuyera, Ongororo uye Masosi
Chishanu, June 13, 2014 Mugovera, January 14, 2017 Douglas Karr
App Annie's Kushambadzira Analytics inosanganisa nharembozha yekushandisa mari yemari uye mari pamwe chete nekutora pamwe nemari inowanikwa. Izvi zvinopa vashanduri vekushandisa nzwisiso kune avo maapplication 'musika mashandiro ese mune imwechete, yakapusa yekuzivisa interface. App Annie yaive yatove inozivikanwa zvakanyanya kune app chitoro analytics uye musika njere. Kunze kwegedhi, yavo yekushambadzira analytics inosanganiswa neMobvista, nativeX, RevMob TapIt, Tapjoy, Taptica, AdColony, AdMob, Appia AppLift, AppLovin, Everyplay GameAds iAd Network, iAd